६.३१ अंकले घट्यो नेप्से, दुई कम्पनीको शेयरमूल्यमा सर्किट (२ बजेको अपडेट) | गृहपृष्ठ
Home लगानी नेप्से विश्लेषण ६.३१ अंकले घट्यो नेप्से, दुई कम्पनीको शेयरमूल्यमा सर्किट (२ बजेको अपडेट)
६.३१ अंकले घट्यो नेप्से, दुई कम्पनीको शेयरमूल्यमा सर्किट (२ बजेको अपडेट)
असार २३, काठमाडौं (अस) । सोमवार नेप्से कारोबार भएको तेस्रो घण्टामा ६ दशमलव ३१ अंक (०.५० प्रतिशत) घटेर १ हजार २४९ दशमलव ७४ विन्दुमा पुगेको छ । यस समयसम्मको कारोबार अवधिमा १ सय ६१ कम्पनीको ४ हजार ५ सय ४७ पटकको कारोबारमा रू. ३९ करोड १३ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको हो । यस समयमा कारोबारमा आएका ११ समूूहमध्ये जलविद्युत समूह, वित्त समूह र म्युचुअल फन्ड समूह बाहेक बाँकी सबै समूहको परिसूचक घटेको छ ।
सो समयावधिसम्म प्रभु बैंकको संस्थापक शेयरको सर्वाधिक बढी रू. ११ करोड ४५ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ भने दोस्रोमा साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशनको रू. ३ करोड बराबरको कारोबार भएको छ । कारोबारको सो समयसम्म सोमवार नेप्सेमा सूचिकृत कम्पनी इन्फिनिटी लघुवित्तको शेयरमूल्य १० प्रतिशत बढेर सकारात्मक सर्किट ब्रेक लागेको छ ।
कम्पनीको शेयरमूल्यमा रू. ३१ ले बढेर रू. ३४३ पुगेको छ । यस्तै, आँखुखोला जलविद्युत कम्पनीको शयरमूल्य ७ दशमलव शून्य ४ प्रतिशत बढेको छ । त्यस्तै, जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्तको शेयरमूल्य ९ दशमलव ९१ प्रतिशत घट्दा नकारात्मक सर्किट ब्रेक लागेको छ । कम्पनीको शेयरमूल्यमा रू. १०५ ले घट्दा हाल रू. ९५४ मा पुगेको छ ।